पत्याउनु हुन्छ ? एकै व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसी सजाय | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पत्याउनु हुन्छ ? एकै व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसी सजाय
पत्याउनु हुन्छ ? एकै व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसी सजाय
फागुन ६ गते, २०७४ - १४:३९
पाकिस्तान । पाकिस्तानको एक अदालतले शनिबार एक व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिएको छ । सो अदालतले ती व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । एक बालिकाको बलात्कार र त्यसपछि हत्या गरेको आरोपमा फाँसी दिइएको थियो ।
शहरको पूर्वी भागमा छ वर्षीया जाइनाब फतिमा नाम गरेकी ती बालिकाको गत महिना बलात्कार र हत्या भएको थियो ।
फाँसीको सजाय पाएका ती व्यक्तिलाई पञ्जाव शहरमा कम्तीमा सात बालिकालाई आक्रमण गरेको र हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । तीमध्ये पाँच बालबालिकाको हत्या गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
अलिलाई छुट्टाछुट्टै चार वटा आरोपको मृत्युदण्डको सजाय भएको थियो । जाइनाबको बलात्कार र हत्यालगायत अलिलाई आतङ्ककारीवादको समेत आरोप पञ्जाव प्रान्तका न्यायाधीश इहतेशाम कादिरले बताएका थिए ।रासस
फागुन ६ गते, २०७४ - १४:३९ मा प्रकाशित